25 April – Maalinta caalamiga ee Duumada | Radio Himilo
Home / Caafimaad / 25 April – Maalinta caalamiga ee Duumada
25 April – Maalinta caalamiga ee Duumada
Posted by: Mahad Mohamed April 25, 2019
Himilo FM– Maalinta Caalamiga ee Duumada ama Malaariyada waa baraarug guud oo sanad kasta la xuso bisha April 25-keeda – iyada oo lagu garowsado dadaallada caalamiga ah ee lagu maareynayo cudurkan. Duni ahaan, 3.3 bilyan oo ku kala nool 106 dal ayaa halis ugu jira Duumada.
Sanadkii 2012, cudurka Duumada waxaa u geeriyooday tiro lagu qiyaasay 627,000 kuwaas oo badankood kasoo jeeda qaaradda Afrika. Qaaradaha Aasiya, Latin Ameerika, tiro kooban oo kamid ah Bariga Dhexe iyo Yurub ayay sidoo kale Duumada saameyn ku leedahay.
Xuska Maalintan wuxuu soo alkumay bishii May sanadkii 2007 markaas oo lagu calaameeyey kal-fadhigii Guud ee Caafimaadka Dunida. Maalintanna, waxaa loo doortay si sare loogu qaado aqoonta iyo fahamka la xiriira Duumada.
Iyada oo la kaashanayo dadaallada ku dhasha Maalinta Caalamiga ee Duumada, Maalinta Malaariyada Afrika waxaa markii ugu horreysay la qabtay sanadkii 2001 – gu’ kadib ku dhawaaqistii taariikhiga aheyd ee Abuja oo ay saxiixeen 44 dal oo Afrikaan ah kuwaas oo la dhiban saameynta cudurkan.
Hal-ku-dheggii ugu horreeyey ee loo sameeyo xuska Maalintan sanadkii 2008-da, wuxuu ahaa; Malaariya – cudur aan xuduud laheyn. Taniyo markaasna, sanad kasta, waxaa la qaataa hal-ku-dheg guud oo la iskugu baraarujinayo halista cudurkan iyo sida loo xakameyn karo.
Kaneecada ama Duumada waa halis mararka qaar ka dhigan cudur raad danbe ku yeesha xubnaha qofka oo laga qaado Kaneecada ama Dhilmaanyada. Cudurku wuxuu fidaa marka Kaneecadu qaniinto oogada ama jirka qofka.
Ereyga Malaria – micnihiisu wuxuu ka yimid isu-geynta laba magac oo kala ah; Hawo-Xun. Qarnigii 18aad, ayay aheyd markii ay seynisyahannadu maleeyeen in cudurkani uu ku faafo qaadashada ama neefsiga Hawada Xun.
Sanadkii 1880-kii, si kastaba, waxay daah-rogeen inaysan taasi run aheyn. Hayeeshe magacu wuxuu noqday mid sidiisa loo qaatay.
Duumada waxaa si guud ugu badnaan looga helaa qaaradda Afrika iyo qeybo kamid ah koofur bari qaaradda Aasiya. Dhaqan ahaan, dalal badan oo Afrika iyo koonfur bari Aasiya ku yaalla waxay ku jiraan heerka ugu sarreeya ee faqriga; dadkuna maheli karaan kahortagga cudurka Duumada iyo daawadeeda – mana helaan aqoon ay xaggeeda u leeyihiin.
Sida la tilmaamo, Duumadu waxay saameysaa celcelis ahaan 200 oo milyan sanad kasta. Ku dhawaad hal milyan oo kamid ah labada boqol ee milyan ayaa sanad kasta u geeriyooda.
Dhimashada cudurkan, 90% waxay ka dhacdaa qaaradda Afrika. Gudaha qaaradda, hal cunug ayaa u dhinta Duumada ama Kaneecada daqiiqad kasta.
Tallaalkii ugu horreeyay ee xannuunka Duumada ayaa laga bilaabayaa dalalka Malawi, Kenya iyo Ghana.
RTSS ayaa qeyb ahaan ka difaacaya carruurta xannuunka Duumada iyadoo uu badbaadin u noqon karo 4 kamid ah 10-kii carruur.
Previous: Arsenal oo beddelka Ramsey u dhaqaaqday
Next: Badmareenkii ka badbaaday shilalkii ugu xummaa qarnigii 20aad!
14 November – Maalinta caalamiga ee cudurka macaanka
Halkee ayaa wali laga isticmaalaa telefishanadii hore ee aan midabka laheyn?
Gobalka Baltimore oo aqoonsanaya fasaxyada Ciidaha Muslimiinta
31 October – Maalinta Caalamiga ee Magaalooyinka
Philipiness: Tuulo yar oo dadweynaha cunto loogu beddalayo qashinka ay uruuriyaan!
10-ka dal ee dadkooda waaweyn ka badan yihiin carruurta
Sardinia: Xatooyada ciidda ayaa lagu muteysan karaa lix sanno oo xarig ah!
Waa maxay sababta uu Trump u iibsanayo jasiiradda ugu weyn caalamka?
Daraasad: Carruurta oo beenta ka barta Aabbaha!
Toddobo hab-dhaqan oo dhaawac ku noqon kara mustaqbalka qofka
Halkee ayay ku nool yihiin tirada ugu badan ee libaaxyada qaaradda Afrika?
Baaritaan: Kala bar dadka Jarmalka ayaa u arka Islaamka “Khatar”
Daraasad: Bunka oo kaa caawin kara inaad dhinto miisaankaada
Hantida bilyaneerada caalamka oo hoos u dhacday markii ugu horreysay muddo 10 sanno ah
Lakulan – Ninka haddiyad la guddoonsiiyay ku noqday Milyaneer!
Shiinaha oo qabanaya madal caalami ah oo ku saabsan shaahiga dalkaasi
Nin bakhtiyaa nasiib ku helay $220 Milyan oo diiday in uu heybtiisa shaaciyo!
Wax ka ogow shaqooyinka ugu mushaarka badan Ruushka
© Copyright 2019, All Rights Reserved to Radio Himilo